Makeup yamadoda, sele iyinyani | Amadoda aQinisekileyo
Utyekelo ngokubhekisele kwimetroxuality kunye nenyaniso yokuba amadoda ayaqonda nangakumbi ngenkangeleko yawo, wenze ukuba kwenzeke indlela yobudoda kwiimveliso, iimpahla okanye amasiko ngaphambili abekelwe kuphela abantu basetyhini. Besisele sithetha nawe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo malunga umbhinqo oyindoda, namhlanje singena kwihlabathi lezinto zokuthambisa zamadoda.
Tyhila iphepha ZeMpilo zeMadoda lwenziwe kwinyanga yonke kaFebruwari kuvavanyo kwiwebhusayithi yalo apho kwavela khona idatha enomdla kakhulu, enjeya amadoda amathandathu kwabalishumi angakuvuma ukusebenzisa izithambiso ukuphucula inkangeleko yawo.
Kufuneka kuthiwe ukuba uphando lwenziwe phakathi Amadoda aphakathi kweminyaka eyi-30, ezidolophini, nabahlali bezixeko ezikhuluKodwa okwangoku, iziphumo zazimangalisa: Iipesenti ezingama-80 zathi zaxutywa, ngelixa ama-60% avumile ukuba angakulungela ukubamba izithambiso.
Nangona ekupheleni kosuku, i-makeup ayibuqondi ubuso babasetyhini okanye bendoda, kumaxesha akutshanje bebebonakala bahlukile Izindululo ezivela kwimveliso ezinje ngoKen Men, uGuerlain okanye uJean Paul Gaultier.
Umzekelo, umgca wobuso kaJean Paul Gaultier uquka ibhalsam yomlomo eyondlayo kwimibala eyahlukeneyo, ijeli enemibala yamashiya kunye neenkophe, ipensile yokusetyenziswa kabini (i-khol kunye neesangqa ezichasene nobumnyama), ukuvuselela i-balm yobuso yokuthambisa, ukuqengqeleka kwindebe yendalo, Ukuxutywa komgubo welanga nobuso obuntsundu ukufuma ebusweni.
Yiza kubuso, Indoda isuka ekubeni yi-metrosexual iye kwi-urbesexual eyiyo, Elungisa ukungafezeki, isuse ububomvu, izangqa ezimnyama kunye nokuqaqamba, kunye nokuhambisa isikhumba. Ewe khumbula ukwenza ngobulumko sisitshixo sempumelelo, kwabo babonakala ngathi abekho, musa ukungcangcazela kunye neebhegi zangasese zentombazana yakho kwaye uphele njenge-folkloric ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Makeup yamadoda, sele iyinyani
U-Enrique Olvera sitsho
Akunjalo konke konke, andizukubeka makeup emhlabeni. Ndizicingela ukuba ndonwabile ngenxa yendlela endinxiba ngayo kwaye ndihlala ndikhangeleka ndimane ndithetha kwaye ndihamba. Ndiyikhathalela kakhulu inkangeleko yam kwaye ndiyazilolonga rhoqo.
Ndiyandithanda iziqholo nezithambiso, kodwa loo nto ayikude kum ekubeni ndithambise.
Njengendoda ndiyigcina into yam eyindoda; kodwa nangona kunjalo ndizama ukuqinisekisa ukuba umzimba wam kunye nenkangeleko yam yanele ngokwembono yamanenekazi.
Ndingathanda ukwazi ukuba eNicaragua ndingazifumana phi ezi mveliso.
UAdrian Vera sitsho
Ungathini ... kulungile kakhulu malunga nokwenziwa kwamadoda, kodwa kuba kwezi foto kubonisa kakhulu ukuba yenziwe, ayizukuvela ngathi wonke umntu angayiqaphela, kwaye amantombazana asondele kakhulu kuyo yiba neentloni ukuxelelwa ukuba wenziwe, ungakholelwa
Phendula kuAdrián Vera
Ewe, ndicinga ukuba akukho mntu kufuneka abe neentloni, ndinabahlobo abafaka izithambiso kwaye ndicinga ukuba licebo elihle kuba bebahle. wonke umntu unendlela yakhe yokufumana ubuhle mhle?
Ewe, kubonakala kulungile kum ukuba bayayenza ukuba banokungafezeki ebusweni babo, okanye ibala elikhulu. kodwa ayisiyiyo yokuba bayahamba njengaye lowo usefotweni umzekelo
UMarco Martinez sitsho
Ndicinga ukuba isetyenziselwa imodeli yezithombe
Ndithambise izithambiso, ndafaka into yokufihla izangqa ezimnyama kwaye ndafaka isiseko esikhanyayo kwaye ndikhangeleka ngathi akukho nto.
Ewe, ndingathanda ... uyazi ukuba ndingumlingani kodwa inyaniso kukuba andikaze ndifane ne-metrosexual ... ndihlala ndiqhelekile ... nangona kunjalo ndineendawo ezininzi ezimnyama kwaye ukuba iyandikhathaza kancinci ... kodwa ingandithatha kakhulu ukusebenzisa into enjalo andifuni ukuzibona ndingumfazi nokuba ... ungayifumana phi loo makeup eMexico?
Ndingathanda ukusebenzisa izimonyo ukuphucula ukubonakala kwam, ngendlela efanayo amantombazana asebenzisa ngayo izinto zokuthambisa, ndicinga ukuba iluncedo oluncinci kwaye isebenza ngokupheleleyo
Ngoku ndenza izithambiso kodwa ndisebenzisa amantombazana, njengesiseko, icompact powders, ukufihla, imilebe yomlomo nabanye kodwa ngendlela efihlakeleyo kwaye ngale ndlela umntu ubonakala engcono
Abafana banxibe i-makeup !!! ayithathi ubudoda kwaye ayiniki nobufazi !!!
Ubuncinci bonke abahlobo bam njengamadoda enza kunye nokundithambisa, oko kuthetha ukuba bacocekile kwaye bayabonakala,
Hayi, inyani yile, andivumelani nokwenziwa kwamadoda, ndicinga ukuba indoda kufuneka ibenjengoko injalo, kulungile ukuba iyazikhathalela ngezithambiso nezinto ezinjalo, kodwa ukusukela oko ukwenza, hayi ukwakheka kwamadoda njengabafazi kuyafana kuphela ngeepesenti ezahlukeneyo, ubunyani bokuthenga, kamva sizakuthetha ngesingqisho samadoda nabafazi, izithunzi nezithende, naaaa hayi ukwenziwa kwamadoda
Inyani yile yokuba inkwenkwe enezinto zokuthambisa kwaye inyamekelwa kakuhle ithi okuninzi ngaye, ukwenza izithambiso akuthethi ukuba bayisebenzisa njengathi, kodwa ngendlela echuliweyo yokuba kukho imfihlo.
Kule mihla kukho ubuhle kunye neemveliso zokwenza amakhwenkwe emakhayeni kodwa ukuba ukhetha ukusebenzisa amantombazana, kuba akukho nto iphosakeleyo kwaye ayizukuthatha ubudoda babo okanye nantoni na.
Thina mantombazana njengamakhwenkwe athiwe thaca kakuhle kwaye ukuba bayabuphucula ubukho babo ngoncedo lwezinto zokuzilungisa, zilungile kubo ... kwaye kunjalo kuthi ... kuba ungafumana inzuzo encinci kuyo.
Ewe, ngokwam ndicinga ukuba umbono wokusebenzisa izinto zokuthambisa, nangaphezulu, ubonakala ubalasele, ngoba? Ngenxa yokuba ukwakheka akusengombandela wabafazi, ngoku kuqhelekile phakathi kwamagcisa kunye neemodeli, kwaye abanalo nje elo lungelo, yiyo loo nto abafazi benyibilika ngenxa yamadoda amaninzi kwizikrini, lixesha lokuba thina njengamadoda zijongeka kakuhle njengazo kwaye zicocekile zisijikelezile.
Ngoku, kuyinyani ukuba bekungayi kuba mnandi ukubona indoda enobuso obugqithisileyo, kubonakala ngathi luhlobo lwesigqubuthelo sobuxoki, ukuthambisa izobugcisa, ayinguye wonke umntu onokuchukumiseka ukuba abe nobuqili kodwa ndincoma ukuba uyawuthathela ingqalelo lo mbandela, zama okanye sele ndenzile kwaye iziphumo bezisemagqabini. Masinwabe!
Molweni nonke. Ndingumculi wobugcisa kwaye ndenzela abantu iifoto, andicingi ukuba kubi emadodeni ukuba athambise, ukuba ndiziva ndibhetele ...
Into endiyicingayo kukuba ngakumbi nangakumbi amadoda angamaxhoba okuthenga abathengi kunye noxinzelelo lweemveliso ukuba zibukeke ngcono, andicingi ukuba xa bezisasaza simahla, iifemu ezinkulu ziya kuba nomdla emadodeni azithambisayo, ke masicinge kuba ezinye i-tendensias ziyavela ...
Ewe, into ebalulekileyo kukoyisa amabala entlalontle kwaye amadoda awakuthinteli ukusetyenziswa kwezithambiso, loo nto ilula, umbono olungileyo, hahaha ...
Iya kufumaneka phi apha eMexico?
Enkosi ukuba ungandixelela, andikhathazeki kakhulu ngokwasenyameni kodwa andikukhupheli ngaphandle ukusetyenziswa kwezithambiso nangona kufanelekile ukuba bathabathe izithambiso zamadoda kwimigca eyaziwayo, akukho sidingo sokukhathalela ukuba akukho nto uqaphele, kubonakala indalo kodwa ungabi nazintloni ukuyenza phambi kwabanye.
Kulungile le makeup ye-bacaneta kodwa incinci ebonisa ukuba igcwele kakhulu kwithoni kuba iithoni ezahlukeneyo zisetyenziselwa zombini ukunciphisa ubume bobuso kodwa kuyathakazelisa ndifuna ukwazi ukuba ndizifumana phi ezi mveliso ePeru.
Ungakuphepha njani ukulahleka kweenwele ehlotyeni